Isticmaalka Lead-Ka Ee Caruurta (Somali) | Snohomish Health District, WA
Macdanta lead waa bir culus oo si dabiici ah u samaysanta taas oo sun ah marka ay jidhkeena gasho. In kasta oo la dhimay ama la baabi'iyay isticmaalka sunta lead-ka ee rinjiga guryaha, shidaalka iyo tuubooyinka biyaha la cabbo, haddana waxaa wali laga heli karaa deegaankeenna alaab duug ah iyo kuwo cusub oo ay kujirto macdanta lead. Alaabooyinku waxay ka qayb qaadan karaan inay keenaan sunta lead. Xataa qadar yar oo ah sunta lead waxay keeni kartaa natiijooyin caafimaad darro. Dadka oo dhan way saameyn kartaa sunta lead, laakiin macdanta lead aad ayay khatar ugu tahay carruurta, gaar ahaan kuwa ka yar lix jirka.
Yaa ay tahay in la baaro
Carruurta, macdanta lead waxay waxyeelo badan u gaysataa marka ay da'doodu tahay lix sano iyo ka yar. Carruurtu waxay u korayaan si xawli ah - lafaha koraya, korida muruqyo xoog badan iyo abuurista xiriiro badan ee maskaxdooda ah. Marka halkii ay ka heli lahaayeen nafaqooyinka lagama maarmaanka ah jirka ay ka "helaan" lead-ka si uu u sameeyo lafaha, murqaha, iyo maskaxda, waxyeello joogto ah oo caafimaadka ah ayaa dhici karta. Xataa heerarka ka hooseeya heerarka hadda, macdanta leead-ka waxay noqon kartaa mid waxyeello leh waana lala xiriirin karaa:
Naafaynta waxbarashada taasoo keenta hoos u dhaca garaadka (IQ oo hoos u dhaca)
Xanuunka yaraynaya feejignaanta
Dhaawac kuyimaada habdhiska neerfaha
Hadalka iyo luqadda oo waxyeelo gaarto
Koritaanka murqaha oo yaraada
Koritaanka lafaha oo yaraada
Waxyeelo kutimaada kelyaha
Isticmaalka heerarka sare ee macdanta lead-ka waxay khatar kutahay nafta waxayna sababi kartaa qalal, miyir la'aan, iyo dhimasho.
Xarumaha Xakamaynta Cudurrada (CDC) waxay dejiyeen heerka tixraaca ee 5 μg/dL (micrograms per deciliter. Heerkan looma tixgalinayo heer badbaado leh, taas beddelkeeda waxaa loola jeedaa in uu noqdo heer tixraac u ah si loo kiciyo ficilka caafimaadka dadweynaha.
Ma jirto inta la garanayo heerka lead-ka dhiigga ee carruurta oo aan lahayn heer khatar ah oo ka mid ah saamaynta xun ee neerfaha ee ay keento isticmaalka lead-ka ee carruurta.
Haweenka uurka leh, waxaa jira caddayn ku filan in heerarka lead-ka dhiigga hooyada (BLL) <5 μg/dL ay la xiriirto hoos u dhaca koritaanka uurjiifka ama miisaanka cunuga oo hoosaysa xilaga dhalida. BLL <10 μg/dL waxay la xiriirtaa hoos u dhaca korriinka dhalmada ka dib, iyo BLL <10 μg/dL ee carruurta waxay la xiriirtaa hoos u dhaca wareegga madaxa, dhererka, ama tilmaamayaasha kale ee koritaanka iyo daahitaanka qaan-gaarnimada.
Hay'adda ka Shaqeeya Walxaha Sunta & Diiwangelinta Cudurrada - Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan saamaynta caafimaad ee sunta lead-ka ee heerarka kala duwan.
Leadku waa bir faa'iido leh oo caan ah taas oo loo isticmaali jiray badeecooyinka boqollaal sano.
Rinjiga duugga ah ee ay ku jirto lead-ka ayaa weli ah khatarta ugu weyn ee saamaynta lead-ka. Rinjiga ka weyn 1978 ayaa walaac leh, laakiin rinjiga ka weyn 1950 wuxuu yeelan karaa heerar aad u sarreeya oo lead-ka ah. Sunta lead-ka ayaa laga bixin karaa rinjiga duugga ah marka la goynaayo, la fiiqaayo, la dillaacinayo.
Rinjiga sii xumaanaya wuxuu ku abuuri karaa wasakh gudaha guriga iyo carrada guriga u dhow.
Inkasta oo Gobolka Washington uu ku jiro kaalinta 17-aad ee waddanka tirada guryaha la dhisay ka hor 1950, qaybo ka mid ah Degmada Snohomish waxay kordhiyaan halista aamaynta lead-ka sababo la xiriira da'da guryaha halkaas ku yaal.
Wax badan ka baro oo ku saabsan dib-u-habaynta iyo dib-u-qaabaynta gurigaaga si badbaado leh.
Leedhka ayaa laga helay dahabka carruurta ee jaban ee lagu iibiyo mashiinada wax lagu iibiyo iyo dukaamada qiima dhimista weyn sameeya ee dalka oo dhan. Waxa kale oo laga helay biraha aan qaaliga ahayn ee loo xidho xirsi xhidka ama ilaalinta. Dahabka dharka qaarkood ee loogu talagalay dadka waaweyn ayaa sidoo kale la ogaaday inay ku jirto macdanta lead-ka. Bar carruurta inay ka fogeeyaan dahabka afkooda, ama ha u oggolaan carruurta inay haystaan dahabka ka samaysan lead-ka. Wax badan ka baro CDC.
DHIRTA UDGOON IYO MACMACAANKA DIBADA LAGA KEENO
Macdanta lead-ka ayaa laga helay mac macaanka iyo duubka mac macaanka ee laga keeno Meksiko iyo Aasiya. Baro sida Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Maraykanka (FDA) ay isku dayayaan inay xakameeyaan macdanta lead-ka ee kujirta mac macaanka dibadda laga keeno.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee California - Liiska mac macaanka ee dib loogu xasuusto wasakhda lead-ka
Degmada Onondaga - Liiska dawooyinka dad waynaha iyo mac macaanka qowmiyadaha, waxyaalaha la isku qurxiyo iyo cuntada ay ku jirto lead-ka.
HIWAAYADAHA IYO FARSHAXANKA
Qalabka farshaxanka qaarkood, sida rinjiga farshaxanka, ayay weli ku jirtaa lead-ka. U soo iibso kaliya rinji aan sunta lahayn carruurtaada. Hiwaayadaha qaarkood waxay u baahan yihiin isticmaalka lead-ka, sida dhalooyinka wasakhaysan, qoriga toogashada, samaynta rasaasta, samaynta waxyaalaha lagu soo jiido malayga iyo waxyaalaha quusa. Ka fogee carruurta meelaha lagu isticmaalo lead-ka. Iska hubi inaadan la keenin dharkaada wasakhda lead-ka markaad guriga keenayso.
Macluumaad ku saabsan goobaha isticmaalka hubka.
Labo ilood oo suurtagal ah oo laga heli karo ciidda wasakhaysan waa goobta shidaalka ay kujirto lead-ka iyo hawlgallada warshadaha sida meelaha shidaalka laga qodo. Halka batroolku guud ahaan aanu ahayn isha ugu weyn ee ay ka imaato lead-ka, tobannaan sano oo ay jirtay batrool lead-ka wata ayaa wasakh kaga tagay ciidda ku xigta waddooyinka ilaa meel afar- talaabo u jirta waddada..
Goobaha laga qodo shidaalka ee taariikhiga ah, sida goobta Everett copper ee ka shaqayn jirtay woqooyiga Everett, ayaa sidoo kale laga yaabaa inay wasakheeyeen ciidda. Goobta Everett waxay ku taalay meel u dhow geeska Marine View Drive iyo Broadway. Waxay ka shaqaynaysay Asarco intii u dhaxaysay 1894-1912, laakiin wasakhda lama ogaan ilaa 1990. Waaxda Cilmiga deegaanka ee Washington ayaa ka shaqaynaysay nadiifinta goobta arsenic iyo wasakhda lead-ka ee lala xiriirinayo goobta shidaalka ee Everett, tuubada qiiqa bixisa iyo dib u isticmaalka wasakhda dhagaxa.
Wax badan ka baro oo ku saabsan goobta shidaalka laga qodo ee Asarco .
DAAWOOYIN DHAQAMEEDKA AMA WAXYAALAHA LA ISKU QURXIYO
Qoysaska qaarkood waxay isticmaalaan dawooyin dhaqameedka guriga si ay u daweeyaan jirrooyinka. Daawooyinka qaar waxa ku jiri kara ilaa 100 boqolkiiba sunta lead-ka oo aad khatar ugu ah carruurta. Daawooyinka guriga oo laga yaabo inay ku jiraan lead-ka:
Azarcon iyo Greta, labadaba waxaa laga helaa budooyinka liinta (sidoo kale waxaa loo yaqaan Alarcon, coral, luiga, maria luisa, ama rueda) waxaa laga yaabaa in ay u isticmaalaan bulshada Hisbaaniga ah dheefshiidka ama calool xumada .
Paylooah, budo guduudan ama oranji ah, waxaa laga yaabaa in la siiyo carruurta ku nool Vietnamese iyo bulshada Hmong si ay dawo uga noqoto finanka ama qandhada.
Ghasard, Bali Goli, iyo Kandu waxa laga yaabaa in ay u isticmaalaan calool xanuunka bulshooyinka Hndiyan Aasiyaanka ah qaarkood.
Waxyaabaha la isku qurxiyo qaarkood, gaar ahaan kuwa ka imaada Bariga Dhexe, Hindiya, iyo Aasiya, ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku jiraan heerar sare oo lead-ka ah. Waxyaabaha la isku qurxiyo ee laga yaabo inay ku jiraan macdanta lead-ka waa Kohl, Kajal, Surma, iyo Sindoor.
Wax badan oo kusaabsan Daawooyinka dadwaynaha iyo dhirta udgoon ee qawmiyadaha, waxyaalaha la isku qurxiyo iyo cuntada ay ku jirto lead-ka.
Boodhka lead-ka waa mid ka mid ah sababaha ugu horreeya ee ku-sumoowga lead-ka ee carruurta. Boorka lead-ka ayaa ka abuurma meelaha sagxadaha ah ee ay lead-ka kujirto, sida daaqadaha, albaabada, jaranjarooyinka iyo cooshashka lagu rinjiyeeyay ranjiga lead-ka, ay isku xoqmaan. Siigada lead-ka waxay ku aruuri kartaa sagxadaha, roogagga, alaabta carruurtu ku ciyaarto iyo walxaha kale ee laga yaabo inay carruurtu afka geliyaan. Dib u habeynta ama dib u rinjiyeynta waxay sidoo kale kordhin kartaa tirada boodhka lead-ka ee gurigaaga.
MACDANTA LEAD-KA EE GOOBAHA SHAQADA
Dadka waaweyn ee ka shaqeeya warshadaha isticmaala Lead-ka (soo saarista baytariga, rakibidda tuubooyinka, goobaha hubka, burburinta, soo saarka dhalooyinka, hawlaha macdan qodida, iwm.) waa inay ka taxaddaraan inay guriga la yimaadaan lead-ka. Qubeyska beddelashada dharka iyo kabaha goobta shaqada. Ha wasakhayn gaadhigaaga.
Macluumaad ku saabsan goobaha hubka.
Alaabta laga sameeyay dhoobada waxay noqon karaan kuwa khatar ah marka lagu daboolo dabool leh lead-ka ama rinjiga lead-ka. Macdanta lead-ka ayaa lagu dari karaa midabada si ay u dhalaaliso oo ay u sinto. Haddii aad diyaariso, bakhaar ama ku adeegto cunto iyo cabbitaannada noocyadan alaabada dhoobada ah, macdanta lead-ka waxay geli kartaa cuntadaada ama cabitaankaaga waxayna sababi kartaa dhibaatooyin caafimaad. Yaree isticmaalka alaabtan ama ku beddel badeecooyinka aan lead-ka lahayn.
Biyaha la cabbo waxaa laga yaabaa inay ku jiraan lead-ka, inkastoo heerarka la oggol yahay ee ilaha degmada la kontaroolo. Isha ugu weyn ee macdanta lead-ka ee biyaha la cabbo waxay ku timaadaa iyadoo ka soo dareeraan tuubooyinka macdanta lead-ka ay ku jiraaan, qasabadaha, iyo alxanka, kuwaas oo laga heli karo tubooyinka dhismayaasha qadiimiga ah. Haddii ay gurigaaga ku jiraan tubooyinka da'da ah, hubi inaad biyaha sii dayso 60 ilbiriqsi subax kasta ka hor intaadan isticmaalin. Ha u isticmaalin biyaha kulul ee tuubada cabbitaan ah.
macdanta lead-ka macdanta lead-ka ee kujira biyaha la cabbo.
Haddii ilmahaagu ka yar yahay lix sano jir, waa inaad kala hadashaa dhakhtarkaaga wixii ku saabsan in ilmahaaga laga baadho lead-ka haddii ay jawaabtaadu tahay ‘’haa’’ mid ka mid ah su'aalahan soo socda.:
Cunugu ma u qalmaa Medicaid ama Apple Care?
Cunuga miyuu degan yahay ama si joogto ah ma u booqdaa guryihii ka horeeyay 1978 oo xaaladdoodu liidato ama dhawaan la cusboonaysiiyay?
Cunuga miyuu leeyahay walaal ama saaxiib uu la ciyaaro kaasoo qabo ama dhawaanahanba laga helay heerka sare ee lead-ka dhiiga?
Ilmahaagu ma la qaataa wakhti qof kasta oo ka shaqeeya ama hiwaayad u leh halkaas oo laga yaabo inay ka shaqeeyaan lead-ka?
Ma haysaa dheriyo ama alaabta dhoobada oo lagu sameeyo waddamo kale ama qarshooyinka ama ashuun loo isticmaalo karinta, kaydinta ama ku adeegida cuntada ama cabitaanka?
Ilmahaagu waligiis ma qaatay dawo dhaqameed guriga ama ma isticmaalay waxyaalaha la isku qurxiyo ee dibadda laga keeno? Tusaalooyinka sida: Greta, Azarcon, Ghasard, Ba-baw-san, Sindoor iyo KohlHas your child been adopted from, lived in or visited another country?
Ilmahaagu ma ku nool yahay ama si joogto ah ma u booqdaa guri ku yaal meel u dhow garoonka diyaaradaha ama goobta macdanta laga qodo ee Everett?
Miyaad ka shakisan tahay in ilmuhu halis ugu jiro soo-gaadhista lead-ka amase ilmuhu ma muujiyaa calaamadaha sunta lead-ka (tusaale, dabeecadda cunugu uu wax walba cunaayo, dib u dhaca korriinka, soo-gaadhista la garanaayo)?
Ilmahaaga ayaa laga baadhi doonaa dhiig si loo ogaado inay dhiiggooda ku jiraan heerarka sare ee lead- ka iyo in kale. Sida kaliya ee lagu ogaan karo in ilmuhu qabo lead-ka waa in ilmaha laga baaro sunta lead- ka, sababtoo ah inta badan lama arko calaamada muuqda iyo kuwa qarsoonba..
Wax badan ka baro baaritaanka lead-ka ee dhiigga.